Sina manolo ny fanjaitra nentim-paharazana sy fanjairana kofehy 20Khz milina fanamafisam-peo ultrasonic ho an'ny famokarana lamba sy thermoplastic | Qianrong
Fanoloana ny fanjaitra nentim-paharazana sy fanjairana kofehy 20Khz milina fanamafisam-peo ho an'ny lamba thermoplastic
Item No. QR-S20DL
Ny sakany amin'ny kodiarana welding 22mm
Transducer mifanaraka 5020-4D PZT4
Generator habe 400 * 195 * 98mm
Ny foton'ny masinina fanjairana ultrasonic dia afaka manjaitra ny ankamaroan'ny lamba thermoplastic. Raha ampitahaina amin'ny fanjairana fanjaitra mahazatra sy kofehy dia tsy mila fanjaitra sy kofehy ny zaitra fanjairana, hajaitra avo, famehezana tsara ary hafainganana haingana. Ary ny stitching seamless ultrasonic dia mamaha tanteraka ny olana fa ny làlan'ny fivezivezena amin'ny lohan'ny fantsom-pandrefesana ultrasonika dia tsy mifanaraka amin'ny fitarihan'ny lamba, ary ny olan'ny tsy fampifanarahana dia hanolo ny milina fanjairana mahazatra amin'ny be indrindra.
Tombony amin'ny zaitra tsy misy seam
1. fahamendrehana avo: ny kodiarana welding sy ny kodia tsindry dia mihodina tanteraka mandritra ny fametahana seamless ultrasonic, tsy misy fahasamihafana amin'ny hafainganam-pandeha sy ny zoro, ary tsy hiteraka velarana, fanodikodinana na fanovana endrika ny lamba, izay tena marina tokoa. Noho ny vokam-pandonahana mafana dia tsy ilaina ny mampiasa kofehy fanjaitra, ny vokatra dia tsy tantera-drano, maivana ary mora mivalona.
2. Fanamafisam-peo sy fanapahana fampifangaroana: Ny fanjairana fanjairana tsy miharo volo dia tsy mety amin'ny stitching mitohy, fa koa afaka manapaka lamba mandritra ny fikajiana, ary mahatsapa fifangaroana mandeha ho azy.
3. Tsy misy taratra mafana: Ny angovo dia miditra amin'ny sosona ara-materialy mandritra ny fanjairana ultrasonic, ary tsy misy taratra hafanana. Mandritra ny zaitra tsy tapaka, ny hafanana dia tsy hafindra amin'ny vokatra, izay mahasoa indrindra amin'ny famonosana ireo vokatra mora tohina.
4. seam mifehy azo fehezina: ny lamba dia tarihin'ny kodiarana welding sy ny roller pression, mandalo azy io, ary ny lamba dia ampidinin'ny onja ultrasonic. Amin'ny fanovana ny roller pressure, azo ovaina ny haben'ny seam sy ny embossing.
5. Fampiharana marobe: Ny lamba thermoplastika rehetra (malefaka aorian'ny fanamafisana) dia azo ampidinina amin'ny alàlan'ny fitaovana fanjairana tsy misy fantsom-panafody ultrasonika, ary ny vy dia vita amin'ny vy mihamafy hanitatra ny fiainam-panompoana.
Previous: 20Khz Ultrasonic Plastika fanamafisana plastika amin'ny fitaovana thermoplastic
Manaraka: Haavo matetika 35Khz 1000w Fitaovana fanamafisam-peo ho an'ny lamba Thermoplastic